Amabhaso kuGoogle Play ama-2019: IiNkqubo eziPhumeleleyo zoNyaka | I-Androidsis
Amabhaso okudlala kuGoogle ngo-2019: Ezi zezonaapps zingcono zonyaka
IGoogle I / O 2019 ngoku isemthethweni kwaye inkampani ibifuna ukubhiyozela ukuqala kohlelo lwalo nyaka ngokukhetha ezona zicelo zibalaseleyo ukuza kuthi ga ngoku kulo nyaka. Imalunga neeBhaso zikaGoogle zokuDlala i2019. Qho ngonyaka inkampani ihlala iququzelela la mabhaso, apho ifuna ukubona ezona zicelo zibalaseleyo kunye nemidlalo ye-Android, njengoko sibonile kwi2018.
Kula mabhaso eGoogle Play amabhaso ama-2019 sifumana izicelo ezilithoba, Ezithweswe ngezona zigqwesileyo kwicandelo labo. Ngalo mbasa, inkampani ifuna ukuqaphela umsebenzi olungileyo weziapp. Ngenxa yoko, ukuthandwa kwabo bonke ngokuqinisekileyo kuya kwanda kwivenkile.
1 Elona thuba lifikelelekayo: Cinga i-AI
2 Esona sicelo sokuPhila ngokuPhambili: Woebot
3 Eyona mpembelelo intlalontle: Wisdo
4 Amava eGumbi lokuPhila aPhambili: Ungaze ucinge
5 Uninzi lwenkqubo yokuqhekeka komhlaba: Kancinci
6 Uninzi lweenkqubo zokungenisa izinto: Thepha iTokhi
7 Eyona nkqubo ilungileyo yeemarike ezikhulayo: Canva
8 Eyona midlalo mhle: I-Shadowgun Legends
9 Uninzi lomdlalo wokuqhekeka komhlaba: Umkhosi oMangalisayo weSiteleka
Elona thuba lifikelelekayo: Cinga i-AI
Kweli nqanaba lokuqala sifumana ezo zicelo zenza ukuba ukusebenzisana kwabantu abakhubazekileyo okanye iimfuno ezizodwa, kunye ne-smartphone yabo. Kule meko, yi-Envision AI ebonakala iphumelele. Yisicelo esichaza ngelizwi yonke into oyithathayo ngekhamera, nokuba kubhaliwe. Ke ngoko, thaca njengesicelo esinokuba luncedo olukhulu kubantu abane iingxaki zombono.
Isicelo sinokukhutshelwa simahla kwi-Android. Nangona ngaphakathi kuyo sifumana ukuthengwa.
Umthuthukisi: Cinga iTekhnoloji ye-BV
Esona sicelo sokuPhila ngokuPhambili: Woebot
Icandelo lesibini kula mabhaso eGoogle Play leli. Kuyo sifumana usetyenziso oluvumela abasebenzisi ukuba baphile ngeyona nguqulelo ibalaseleyo, ubuncinci njengoko ibango likaGoogle. Ophumeleleyo kule meko yiWoeBot, enokuvakala ngathi inabanye benu. Sijongene neapp apho singathetha khona nengxoxo, apho sinokubhalisa khona imeko yethu yengqondo. Ikwavumela ukufikelela kwezinye izixhobo zokuziphatha okanye zokuqonda. Kunokuba luncedo kubantu abaninzi ukufumanisa ngakumbi malunga neemvakalelo zabo, ngokungathi banokudakumba.
Ukukhuphela esi sicelo se-Android simahla. Ukongeza, asinakho ukuthengwa okanye iintengiso ngaphakathi.
IWoebot: Ingcali yakho yokuziKhathalela
Eyona mpembelelo intlalontle: Wisdo
Amabhaso okudlala kuGoogle afuna ukuvuza izicelo benze ifuthe elihle kuluntu lwabo. Ophumeleleyo kule meko nguWisdo, isicelo esivumela wonke umntu ukuba abelane ngamava ahambileyo. Enkosi kwisicelo ungafumana abantu abadlule kwinto enye. Ke kunokuba luncedo kule meko, ukufumanisa ukuba aba bantu bakwazi njani ukoyisa le meko kunye nokuqhubela phambili. Zininzi iintlobo zamatyala kwiapp.
Ukukhuphela kwayo kwi-Android simahla. Kwakhona, akukho kuthengwa okanye iintengiso ngaphakathi kuyo.
Wisdo, Fumana Imihla eyonwabileyo
Umthuthukisi: Ubulumko LTD.
Amava eGumbi lokuPhila aPhambili: Ungaze ucinge
Ungaze ucinge sisicelo esinayo yonke into ekufuneka siyenzile kwiVenkile yokuDlala. Yisicelo esikuvumela ukuba ubukele iividiyo ngaphandle kokucinga kakhulu. Yenzelwe loo mizuzu xa sifuna ukuba nengxolo yangasemva, kodwa asifuni kukhangela kakhulu. Ke ngoko, kule app sineendlela ezingama-40 zemixholo. Kufuneka nje ukuba sikhethe enye yazo kwaye abahleli beapp baya kusenzela okunye. Ukongeza, singayisebenzisa ngeChromecast kwaye sithumele umxholo kwiTV.
Ezona zicelo zibalaseleyo zokusebenzisa iChromecast
Ukukhuphela esi sicelo kwi-Android simahla. Ngaphakathi akukho kuthengwa okanye iintengiso zalo naluphi na uhlobo.
Ungaze ucinge: Iimemori zeVidiyo zoqobo
Umthuthukisi: Ungaze ucinge
Uninzi lwenkqubo yokuqhekeka komhlaba: Kancinci
Isicelo ngokungathandabuzekiyo esophula imikhwa yangoku, kwaye ngenxa yoko ufumana ukwamkelwa kweeMbasa zikaGoogle zokuDlala i2019. Yinkqubo yemiyalezo ecothayo. Ingathi sithumela iileta ngeposi, sisebenzisa usetyenziso kwifowuni yethu kule meko. Ngesi sihlandlo, imbalelwano ihamba nabantu abavela naphi na emhlabeni, abathi babelane ngokuzonwabisa nathi. Ke ngoko, kuthatha ixesha elide ukufika ngokungathi yileta yokwenyani. Inkqubo ekhethekileyo.
Ukukhuphela le app kwi-Android simahla. Nangona ngaphakathi kukho ukuthengwa.
Umthuthukisi: Kancinci uNxibelelwano Ltd.
Uninzi lweenkqubo zokungenisa izinto: Thepha iTokhi
Asifanelanga siyibhidanise nenethiwekhi enempikiswano, esele isuswe nakwamanye amazwe. Kule meko, iTick Tock ngumdlalo, nangona kunjalo ngumdlalo wentsebenziswano. Ke ngoko, kuya kufuneka udlale nomnye umntu, ukuze ukwazi ukugqibezela iiphazili esizifumana kumanqanaba ahlukeneyo asemdlalweni. Ngamnye uya kubona kuphela isiqingatha sesikrini. Ke ngoko ukusebenzisana yinto ebaluleke kakhulu. Enye indlela yokufunda ukusebenza kwiqela.
Ukukhuphela kwayo kwi-Android kuneendleko ze-3,39 euro. Ukubuya, akukho kuthengwa okanye iintengiso ngaphakathi.
Thepha uphawu lokukhupha: iTale ezimbini
Umthuthukisi: Ezinye iiNdaba ziyasebenzisana
ixabiso: € 3,39
Eyona nkqubo ilungileyo yeemarike ezikhulayo: Canva
I-Canva yinkqubo eyaziwayo ekuvumela ukuba uvelise iifoto oza kuzisebenzisa kunxibelelwano lwasentlalweni, okanye zonke iintlobo zeemeko. Nangona kunjalo, amabhaso kaGoogle Play axabisa i- ukwenziwa nokulungelelaniswa kosetyenziso lweemarike ezisakhulayo. Benze umsebenzi olungileyo malunga noku.
Ukukhuphela kwayo kwi-Android simahla, nangona sinokuthenga ngaphakathi.
I-Canva: Uyilo, ifoto kunye nevidiyo
Eyona midlalo mhle: I-Shadowgun Legends
Ngesi sihlandlo, amabhaso kaGoogle Play azibophelele ekuvavanyeni umdlalo ngemizobo engcono okanye kwimizobo yoyilo engakumbi, lo mdlalo ungoyena uphumeleleyo kulo nyaka. Sijongene nomdubuli wabadlali abaninzi, ekwanazo nezinto zemidlalo yokudlala indima. Unikwe njengomdlalo onomdla omkhulu, kunye nemizobo eshiya incasa emnandi kakhulu emlonyeni wakho.
Ukukhuphela kwayo kwi-Android simahla. Nangona ngaphakathi sifumana ukuthenga kunye neentengiso.
Iimbali zeShadowgun uJogo de Tiro
Uninzi lomdlalo wokuqhekeka komhlaba: Umkhosi oMangalisayo weSiteleka
Okokugqibela, omnye umdlalo uzuza ibhaso kwezi bhaso zikaGoogle zokuDlala ngo-2019. Ngeli xesha umdlalo osekwe kwindalo yonke eMarvel, enye yazo Kutshanje kuza kwi-Android. Ngumdlalo wokulwa ngobuchule, ekwanazo nezinto zemidlalo yokudlala indima. Inothotho olukhulu lwabalinganiswa, kunye namagorha kunye neendawo ezimbi ezivela eMarvel. Ukongeza, ime ngokucacileyo kwimizobo yayo emangazayo.
Ukukhuphela lo mdlalo kwi-Android simahla. Nangona sifumana ukuthengwa ngaphakathi.
Umkhosi wamandla oMangalisayo
Umendo opheleleyo kwinqaku: I-Androidsis » Ukusetyenziswa kwe-Android » Amabhaso okudlala kuGoogle ngo-2019: Ezi zezonaapps zingcono zonyaka
Ngaphezulu kwe-10% yeefowuni esele zinayo iPie ye-Android
Ukucoca unikezelo lweMoto E6, iselfowuni elandelayo ye-Motorola eya kulwa kuluhlu olusezantsi